အောကား မြန်မာကား အောစာအုပ် ဒေါက်တာမလေး vip တစ်လကို ၅၀၀၀ wechat id >> coyotitoz23 ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ဒဲ့ပြောပါ hi မလုပ်ပါနဲ့
doctormalay.com အားလုံးဖတ်ပေးကြပါ အွန်လိုင်းကနေပိုက်ဆံရှာမယ် ဓါတ်ပုံတွေတင်ပြီးပိုက်ဆံရှာ >
03-04-2018, 04:04 PM (This post was last modified: 03-19-2018, 06:38 PM by Administrator.)
ဆောက်ပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့မေးလ်ထဲကို လင့်တစ်ခု ရောက်လာမယ် ကလစ်လိုက်ပါ
ပြီးရင် ဓါတ်ပုံတွေ တင်ပါ။ လင့်ကို ဒီဖိုရမ်မှာ လာတင်ပါ။ လူတစ်ထောင် ကြည့်ရင် ၄ဒေါ်လာလောက်ရနိုင်ပါတယ်။
1) We pay up to 4.50$ for each 1000 Image views.
2) Minimum payout only 5.00$
5) Earn 5% of points earned by each user you refer.
Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portuguese, Spain, Sweden, Switzerland
China, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Israel, Japan, Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Slovakia, Slovenia
Minimum payout at 5$
Payouts are processed once in every week and all the balance left on account will be paid out.
webmoney account ဒါမှမဟုတ်ရင် alertpay အကောင့် တစ်ခုခု ရှိရပါမယ်။ အဲ့ကနေပိုက်ဆံထုတ်ရမှာပါ။
[email protected] ကို တယ်လီနောကတ် ၅၀၀၀ တန်တစ်ကတ်ပို့ပြီး ဒီဖိုရမ်က username ကိုပို့ပေးပါ။ ချက်ချင်း vip ၂လစာရပါမယ် coyotitoz23 ဝီချက်ကနေပြီးတော့ တယ်လီနောကတ် ၅၀၀၀ တန်တစ်ကတ်ပို့လိုက်ပါ vip ၂လစာရပါမယ် ဒီကိုကလစ်ပြီးကြည့်လိုက်ပါ
Just ask at wechat bros....dun send message to me......
Invest at least 10 usd....
Forum Jump: Private Messages User Control Panel Who's Online Search Forum Home ဇတ်ကားများ Movies -- မြန်မာအောကားများကြည့်ရန်နှိပ်ပါ MyanmarMovies မြန်မာဓာတ်ပုံများ Myanmar Photos -- မြန်မာဓာတ်ပုံများကြည့်ရန်နှိပ်ပါ Myanmar Photos အောစာအုပ်များ -- မြန်မာအောစာအုပ်များ အားလုံးဖတ်ပေးကြပါ -- ဖိုရမ်နဲ့ပတ်သတ်သမျှ -- အွန်လိုင်းကနေပိုက်ဆံရှာမယ် asianscandal -- အာဆီယံပရီမီယမ်ကားတွေ asian scandal အာဆီယံ ရှယ်ပုံများ asian photos (home made) -- ဟုန်းမိတ်ပုံများ home made pictures
Current time: 05-26-2018, 01:52 PM Powered By MyBB, © 2002-2018 MyBB Group My Red by copybot.pro.